ASMARA, Eritrea - Sawiradii ugu horeeyay ayaa laga helay Kulan gaar ah oo Shalay magaalada Asmara ee xarunta Eritrea ku dhexmaray Madaxweyne Farmaajo ee dalkaasi booqasho 3-maalin ku jooga iyo madaxa ONLF, Admiral Maxamed Cumar Cismaan.
Kulankan oo ahaa mid aan horey loo qorsheyn sida uu sheegay Wasiirka warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya, Daahir Maxamuud Geelle, looga hadlay go'aankii dowladda uu hogaamiyo Farmaajo ay Qalbi Dhagax ugu gacan gelisay Eithiopia sanadkii tagey.
Admiral Maxamed Cumar oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu raali-gelin ka siiyay tallaabadii lagu dhiibay Qalbi Dhagax oo kamid ah Saraakiisha ONLF kaasoo bishii lasoo dhaafay laga soo daayay xabsi ku yaalla Addis Ababa.
Laakiin, Wasiirka Warfaafinta ayaa ka gaabsaday inuu fahfaafin ka bixiyo raaligelinta uu Farmaajo ka bixiyay Kiiska Qalbi Dhagax, balse waxuu xaqiijiyay inuu jiro Kulanka ay labada dhinac ku yeesheen Asmara, oo looga hadlay arinta Qalbi Dhagax.
Wasiirka ayaa xusay in Kulanka Farmaajo iuo Madaxa ONLF wajigiisa koowaad ay kala qeybgaleen mas'uuliyiin isaga uu kamid ahaa, balse wajiga labaad ay isku hareen Madaxweynaha iyo Admiral Maxamed Cumar Cismaan, kaasoo Albaabada u xirnaa.
Hadalka Wasiirka oo jawaab u ah midkii mar sii horeysay kasoo yeeray Gudoomiyaha ONLF ayaa waxaa uu kusoo aadayaa iyadoo xiisadda ka dhalatay dhiibitaanka Qalbi Dhagax ay ku noqotay Farmaajo dharbaaxo siyaasadeed oo maamulkiisa ku dhacday.
Qalbi Dhagax oo bishii hore dib ugu helay xorriyadiisa kadib cafis uu u fidiyay Abiy Axmed ayaa dhowr munaasabadood oo uu ka sameeyay hadal-jeedin ayaa wuxuu afka ku balaariyay inay Eithiopia u gacan-gelisay xukuumaddauu hogaamiyo Khayre.
Admiral Maxamed Cismaan, Madaxa ONLF ayaa horey usoo noqday Taliyaha Ciidamada Badda Soomaaliya, waxaana sidoo kale uu xubin kasoo noqday xisbigii Kacaanka dowladdii Marxuum Maxamed Siyaad Barre.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa Kiiska Qalbi Dhagax kala kulantay cambaareyn iyo...